Dalada Sonsaf oo Muujisay Masuuliyad daradii ugu waynayd + Kalsoonidii shacabka oo hoos u sii dhacaysa | Haldoor News
Dalada Sonsaf oo Muujisay Masuuliyad daradii ugu waynayd + Kalsoonidii shacabka oo hoos u sii dhacaysa
Hargeysa(Haldoornews)-Dallada la sheego inay ku midoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf ayaa wali ku hawlan saamayntii ay ku lahayd doorashooyinka somaliland.
Gudoomiyaha Dallada Sonsaf Mustafe Sacad Dhimbiil iyo xubno ka mid ah dalladaas ayaa guclo orod ugu jira inay saamayn ku yeeshaan doorashooyinka soo socda ee golaha wakiilada iyo goleyaasha deegaanada ee dalka, waxaanay maanta kulan buuq badani hadheeyey ku soo bandhigeen xog ururin ku saabsan doorashada wakiilada oo ay ka soo sameeyeen gobolada dalka.
Dallada Sonsaf oo inta badan isku dhigta inay dhex u tahay xisbiyada siyaasada ee ku tartamaya doorashooyinka somaliland, ayaa hadana waxa
dul hoganaya dhaliilo badan oo la xidhiidha kalsoonida lagu qabi karo.
Masuuliyad daradii ugu weynayd ee ka muuqatay kulankii maanta ka qabsoomay Hargeysa ayaa loo arkayey inay soo marti qaadeen inta badan xildhibaanada golaha wakiilada oo markii hore-ba ku guul daraystay inay diyaariyeen nidaamkii lagu dooraan lahaa xildhibaanadii badalayey iyo xeerkii doorashadooda khuseeyey, taas oo saldhig u noqotay buuqa ay qaar ka mid ah xildhibaanadu ka sameeyeen kulankaasi.
Xildhibaan Cabdilaahi Balaki iyo Xildhibaan Waabeeye oo labaduba ka tirsan golaha wakiilada ayaa hormood ka ahaa buuqa hadheeyey kulanka ay soo qaban qaabisay dallada Sonsaf kuwaas oo ka dareen celiyey dhaliilo ay leeyihiin oo uu gudoomiyaha xisbiga Ucid Eng Faysal Cali Waraabe ku soo bandhigay madashii uu kulanku ka socday.
Xildhibaan Balaki ayaa dibada uga baxay kulanka, ka dib markii uu xejin waayey dhaliilaha xaqiiqada salka ku haya ee gudoomiye Faysal u jeediyey golaha uu ka tirsan yahay.
Gudoomiyaha dallada Sonsaf Mustafe Sacad Dhimbiil ayaa hore loogu eedeeyey inaanu dhex u ahayn xisbiyada somaliland, iyada oo wakhtigii lagu guda jiray u diyaar garawga doorashadii madaxtooyada si cad loogu dhaliilay inuu la safan yahay Murashaxii Kulmiye oo haatan noqday madaxweynaha somaliland Md Muuse Biixi Cabdi.
Si kastaba ha ahaatee hogaanka dallada Sonsaf oo ay hoos u sii dhacayso kalsoonadii ay ku qaban dhinacyada iskaga soo horjeeda siyaasada somaliland ayaa mar kale muujinaya inay iska sii wadanayaan fara galinta ay ku hayaan hawlaha doorashooyinka somaliland.